Raharahan-kavana ananana firenena… | NewsMada
Raharahan-kavana ananana firenena…
Maninona no mbola toy izao hatrany ny firenena? Manankarena i Madagasikara, fa ny vahoaka mahantra; midadasika ny tany, fa tsy ampy sakafo ny ankamaroan’ny mponina… Tsy vitan’izay, mihamitombo ny elanelana eo amin’ny vahoaka sy ny tomponandraiki-panjakana, ny mpitondra…
Aiza ho aiza amin’izay ny fampandrosoana? Na ny fitantanana ho amin’ny fanarenana ny fiainam-bahoaka ifotony… Fanambin’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fanajana ny zon’olombelona… Mby aiza?
Fepetra takin’ny mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena rahateo ireo amin’ny fanomezana trosa sy fanampiana. Misy antony ao, matoa mbola mitaky ezaka bebe kokoa hatrany noho ny teo aloha ireo mpamatsy vola amin’ireo fepetra takiny. Tsy tan-dalàna, tsy tsara tantana, be kolikoly… ?
Kibo mitsara tena amin’izany ny tsirairay? Na tsaraina amin’ny kibony… Ny voky tsy mahaleo ny tsaroana? Tsy iza fa ny vahoaka sahirana, zara raha mihinana, na tratran’ny kere… Ambany maso tsy hita, na lavitra akaiky: tsy namana tsinona, tsy havana. Ananan-kavana ny raharaham-pirenena ?
Raha tiana ny hisian’ny fiovana ary tena atao ny fanovana, mba tsy ho raharahan-kavana ananana firenena amin’izay. Tsy ny raharahan-kavana no atao amin’ny firenena, fa raharaham-bahoaka: fampanjakana fandriampahalemana, ady amin’ny fahantrana, ady amin’ny kolikoly…
Tsy vitan’ny hoe ny raharaham-pirenena tsy ananan-kavana izany, fa ny raharahan-kavana tsy ananana firenena. Tsy an’ny tena irery na ny havana na ny namana ny firenena, fa iombonana… Tena atao ve izay fitsinjovana ny soa iombonana izay? Mba tsy toy izao intsony ny fahantran’ny vahoaka maro anisa…
Raha manankarena i Madagasikara, misitraka ny anjara tandrify azy amin’izany ny vahoaka; raha midadasika ny tany, hifotorana ny fanajariana azy hahampy sakafo ny eto an-toerana aloha… Ireo no tena havana raha ananan-kavana ny raharaham-pirenena, na ananana firenena ny raharahan-kavana.